2 Ndị Eze 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Eze 2:1-25
2 O wee ruo mgbe Jehova chọrọ iburu Ịlaịja+ n’oké ifufe gaa n’eluigwe,+ Ịlaịja na Ịlaịsha+ si na Gilgal+ na-agbago. 2 Ịlaịja wee malite ịsị Ịlaịsha: “Biko, nọdụ ebe a, n’ihi na Jehova ezipụwo m ka m gaa Betel.” Ma Ịlaịsha sịrị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ,+ agaghị m ahapụ gị.”+ Ha wee gbadaa Betel.+ 3 Ụmụ ndị amụma+ ndị nọ na Betel pụtara bịakwute Ịlaịsha wee sị ya: “Ị̀ makwa na ọ bụ taa ka Jehova ga-ewepụ nna gị ukwu ka ọ ghara ịbụkwa onyeisi gị?”+ O wee zaa, sị: “Mụ onwe m kwa maara nke ọma.+ Gbanụ nkịtị.” 4 Ịlaịja wee sị ya: “Ịlaịsha, biko, nọdụ ebe a, n’ihi na Jehova ezipụwo m ka m gaa Jeriko.”+ Ma ọ sịrị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ, dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ, agaghị m ahapụ gị.” Ha wee bịarute Jeriko. 5 Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Jeriko bịakwutere Ịlaịsha wee sị ya: Ị̀ makwa na ọ bụ taa ka Jehova ga-ewepụ nna gị ukwu ka ọ ghara ịbụkwa onyeisi gị?” O wee zaa sị: “Mụ onwe m kwa maara nke ọma. Gbanụ nkịtị.”+ 6 Ịlaịja wee sị ya: “Biko, nọdụ n’ebe a, n’ihi na Jehova ezipụwo m ka m gaa Jọdan.”+ Ma ọ sịrị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ, dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ, agaghị m ahapụ gị.”+ Ha abụọ wee na-aga. 7 E nwekwara ndị ikom iri ise n’ime ụmụ ndị amụma, ndị gara guzoro n’ebe dịtụ anya, n’ebe a na-ahụ ha anya,+ ma ha abụọ guzo n’akụkụ Jọdan. 8 Ịlaịja wee were uwe e ji mara ya,+ fụkọta ya ma tie ya na mmiri ahụ, o wee kewaa abụọ, ha abụọ wee si n’ala akọrọ gafee.+ 9 O wee ruo na ozugbo ha gafere, Ịlaịja sịrị Ịlaịsha: “Rịọ ihe m ga-emere gị tupu e wepụ m n’ebe ị nọ.”+ Ịlaịsha wee sị: “Biko, ọ bụ ka m nweta+ òkè abụọ+ nke mmụọ gị.”+ 10 O wee sị: “Ị rịọwo+ ihe siri ike. Ọ bụrụ na ị hụ m mgbe a na-ewepụ m n’ebe ị nọ, ọ ga-emere gị otú ahụ; ma ọ bụrụ na ị hụghị m, ọ gaghị eme otú ahụ.” 11 O wee ruo na, ka ha nọ na-aga, na-ekwu okwu ka ha na-aga, lee! ụgbọ agha na-acha ọkụ ọkụ+ na ịnyịnya ndị na-acha ọkụ ọkụ, ha wee kewaa ha abụọ; Ịlaịja wee rịgoro n’eluigwe n’oké ifufe.+ 12 N’oge ahụ, Ịlaịsha nọ na-ahụ ya, ọ nọkwa na-eti mkpu, sị: “Nna m, nna m,+ ụgbọ ịnyịnya agha Izrel na ndị na-agba ịnyịnya ya!”+ Ọ hụghị ya ọzọ. O wee jide uwe ya aka, dọwaa ya ibé abụọ.+ 13 E mesịa, ọ chịlitere uwe e ji mara+ Ịlaịja, nke dapụnahụrụ ya, wee laghachi ma guzoro n’ụsọ osimiri Jọdan. 14 O wee chịrị uwe e ji mara Ịlaịja, nke dapụnahụrụ ya, ma tie ya na mmiri+ ahụ, sị: “Olee ebe Jehova bụ́ Chineke Ịlaịja nọ, ee, olee ebe Ọ nọ?”+ Mgbe o tiri ya na mmiri ahụ, o ji nwayọọ nwayọọ kewaa abụọ, Ịlaịsha wee gafere. 15 Mgbe ụmụ ndị amụma nọ na Jeriko hụrụ ya n’ebe dịtụ anya, ha malitere ịsị: “Mmụọ+ Ịlaịja adakwasịwo Ịlaịsha.” Ha wee bịa izute ya wee kpọọrọ ya isiala.+ 16 Ha wee sị ya: “Lee, e nwere mmadụ iri ise ha na ndị ohu gị nọ, bụ́ ndị dike. Biko, ka ha gaa chọọ nna gị ukwu. Ọ pụrụ ịbụ na mmụọ+ Jehova ebuliwo ya wee tụgoro ya n’otu ugwu ma ọ bụ tụda ya n’otu ndagwurugwu.” Ma ọ sịrị: “Unu ezigala ha.” 17 Ha nọ na-agwa ya ruo mgbe o mewere ya ihere, o wee sị ha: “Ziganụ ha.” Ha wee ziga ndị ikom iri ise; ha wee na-achọ ya ruo ụbọchị atọ, ma ha achọtaghị ya. 18 Mgbe ha laghachikwutere ya, o bi na Jeriko.+ O wee sị ha: “Ọ̀ bụ na mụ asịghị unu, ‘Unu agala’?” 19 Ka oge na-aga, ndị ikom obodo ahụ sịrị Ịlaịsha: “Lee, obodo a dị n’ebe dị mma,+ dị nnọọ ka nna m ukwu na-ahụ ya; ma mmiri+ anyị adịghị mma, ala a na-akpatakwa ime ọpụpụ.”+ 20 O wee sị: “Wetaranụ m obere ọkwá ọhụrụ, wụnyekwanụ nnu n’ime ya.” Ha wee were ya wetara ya. 21 O wee gaa n’isi mmiri ahụ ma wụnye nnu na ya,+ sị: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Ana m eme ka mmiri a dị mma.+ Ọ gakwaghị egbu mmadụ, ọ gakwaghị akpata ime ọpụpụ.’” 22 Mmiri ahụ wee bụrụ nke dị mma ruo taa,+ dị ka Ịlaịsha kwuru. 23 O wee si n’ebe ahụ gbagoo Betel.+ Ka ọ na-agbago n’ụzọ, e nwere ụmụ okoro nta+ ndị si n’obodo ahụ pụta wee malite ịkwa ya emo,+ na-asị ya: “Gbagowe, onye isi nkwọcha!+ Gbagowe, onye isi nkwọcha!” 24 N’ikpeazụ, ọ tụgharịrị wee hụ ha ma kọchaa+ ha n’aha Jehova. Nne anụ ọhịa bea+ abụọ wee si n’ọhịa pụta dọrie ụmụaka iri anọ na abụọ n’ime ha.+ 25 O wee si n’ebe ahụ gagide ruo Ugwu Kamel,+ o sikwa n’ebe ahụ laghachi Sameria.
2 Ndị Eze 2